Ku saabsan Magazine - Nidaamka Baradhada
Daabacaadda kaliya ee Russia oo si qoto dheer iyo fahansan u daboolaysa beerista, kaydinta, kaydinta iyo iibinta baradhada iyo khudradda “borsch set”. Joornaalka ayaa kor u qaadaya khibradda soosaarayaasha ugu fiican ee Ruushka iyo guulaha ay gaareen khubaro shisheeye.
Dhageystayaasha ugu muhiimsan ee daabacaadda waa madaxda shirkadaha beeraha heerar kala duwan; cilmiga beeraha; madaxda maamullada gobollada iyo degmooyinka, waaxyaha beeraha; wakiillada shirkadaha ka qayb qaadanaya suuqa beeraha; saynisyahano; ardayda jaamacadaha beeraha.
Joornaalka waxaa la daabacaa afar jeer sanadkii. Sanadka 2020, 4 qodobo oo ah joornaalka Nidaamka baradhada ayaa la daabici doonaa.
Lambar 1 taariikhda la siidaayay: Febraayo 19
Lambarka 2 siideynta taariikhda: Juun 2
Lambar 3aad taariikhda siideynta: Sebtember 10
Maya. 4 taariikhda sii deynta: Diseembar 1
Daabacaadda waxaa loo qaybiyaa bandhigyo khaas ah iyo rukumasho ahaan. Tan iyo sanadkii 2015, tifaftirayaasha ayaa bilaabay mashruuca "Magazine for free", taas oo ay ugu mahadcelinayaan taas oo beero kasta oo Ruush ah oo ku hawlan beerista baradhada waxay fursad u leeyihiin inay helaan "Nidaamka baradhada" oo aan la bartilmaameedsanin oo aan lahayn kharash lacageed. Tan iyo markaas, tirada macaamiisha ayaa si aad ah u kordhay.
Juqraafi ahaan qaybinta - guud ahaan Ruushka, codsiyada rukhsaynta si joogto ah waxay uga yimaadaan beeraha ee Trans-Urals, Altai Territory, Bariga Fog iyo Jamhuuriyadda Crimea, laakiin akhristaha ugu weyn ayaa ah dadka deggan gobollada "baradhada" (Moscow, Nizhny Novgorod, Bryansk, Tula iyo gobollada kale; Jamhuuriyadda Chuvashia iyo Tatarstan).
Daabacaadda waxaa iska diiwaangeliyay Adeegga Federaalka ee Korjoogteynta Isgaarsiinta, Teknolojiyada Macluumaadka iyo Isgaarsiinta Mass. Shahaadada PI No. FS77 - 35134 oo ku taariikhaysan Janaayo 29.01.2009, XNUMX
Aasaasaha iyo daabacaha: Shirkadda LLC Agrotrade
Tifatiraha guud: O.V. Maksaeva
Ururka waxsoosaarayaasha Ruushka ee badeecooyinka istaarijka iyo sharoobada "Roskhmalpatoka"